साहित्य – America Nepal
गजल : कुनै दिन छोडी आएको ... कुनै दिन छोडी आएको शहरको सम्झना आयो , वियाेगकाे पीरले कम्पित अधरकाे सम्झना अायाे ।। सिताराले सुसज्जित त्याे सगरको सम्झना अायाे , जवानीका गगनचुम्बी रहरको सम्झना आयो ।। डुलें नौरंगी डाँफेझैं खुला आकाशमा दिनभर , चरा जब गुँडमा फर्के त घरको सम्झना आयो ।। सबैले अञ्जुली थापे , पिए , फर्केर हेरेनन् , नदीलाई उही आफ्नो बगरको सम्झना आयो ।। मिलनको यादिलो मौसम
यदुराम सापकोटा जापान । सामाजीक सञ्जाल फेसबुक आज संसार भरी लगभग सबैजसो मानिस ले चलाउने गर्छन्। म पनि धेरै जसो यही फेसबुक चलाउँछु। मेरा धेरै भन्दा धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ सायद मलाई फेसबुक ले नै केही अपरीचीत मित्र हरु सँग पनि घनिष्ट सम्बन्ध गाँसिएको छ। आज धेरै जसो कामहरु फेसबुक बाटै हुन्छन्, फेसबुक बाटै लभ पर्छन्, छुट्छन् र फेसबुककै सम्बन्ध गाढा भएर बिहे हुन्छ । संसार देख्ने
विद्या सापकोटा तिमी हरायौ त्यो गुनगुनमा बिपनाको खेतिमा निस्कीएँ म ! तिमी भिज्यौ, मात्र मनसुनमा आँफैलाई रित्यायर पोखिएँ म ! सुदुरमा बाँकी रक्तिम किरण गोधुलिको घुम्टोमा छोपीएँ म ! बिलायौ तिमी जूनसँगै प्रतिक्षामा शितसरि तप्पतप्प पोखिएँ म ! श्रीजनामा जुट्यौ तिमी मदहोश अनौठो मुटु सिच्दै चोपिएँ म ! सुन्दै थियौ प्रीतका सम्मोही धुन हाँस्यो हिमाल, झरनासँगै चोखीएँ म !
अँगालोभरि हिरोइन उचालेर म नाच्न सक्दिनँ – जितु नेपाल
– जितु नेपाल ‘मुन्द्रे’ (हास्य कलाकार) सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा २०३२ सालमा जन्मिएका जितबहादुर नेपाल नेपाली हास्यव्यङ्ग क्षेत्रमा ‘मुन्द्रे’ नामले लोकप्रिय छन । जितबहादुर नेपालबाट जितु नेपाल र जितु नेपालबाट मुन्द्रेको अवस्थामा आइपुग्नको लागि उनले निकै ठूलो मिहेनत र संघर्ष गरेका छन् । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको हास्य टेलिशृंखला ‘जिरे खुर्सानी’का सहनिर्देशक
हेटौडामै छुटेको गलबन्दी
विष्णु भण्डारी झम्लङ्ग साँझ पर्दा हामीले सहिद स्मृति पार्क घुमी सिध्यायौँ र खुवा खायौँ । मकवानपुर गढीबाट फर्किदा चुच्चेबजारबाट ल्याएका थियौँ खुवा । तर समयको हतारोले गर्दा खान भ्याएका थिएनौँ । चारैतिर अन्धकार फैलिए पनि सहिद स्मृति पार्क भने विजुलीको उज्यालोमा जगमगाएकै थियो । ओहो ! कति सुन्दर रहेछ सहिद पार्क । जति घुमे पनि घुमुघुमु लाग्ने । घाम डुबिसकेको थियो त्यहाँ
श्रीमानको मृत्यु भए पुनर्विवाह नगरी एकल बस्नु पर्ने महिला?
काठमाडौं । श्रीमतीको मृत्युपछि पुरुष कति समयसम्म एकल रहन्छन् होला ? महिनादिन, बर्षदिन वा केही वर्षसम्म । तर नेपाली समाजमा श्रीमानको कुनै कारणबस मृत्यु भएमा पुनर्विवाह नगरी बस्ने धेरै एकल महिला छन् । एउटै समाजमा बस्ने एकल पुरुष र महिलालाई गर्ने व्यवहार फरक छ समाजको । श्रीमती मृत्यु भएको तेह्र दिनमै दोस्रो विवाह गरेका र गराइदिनेहरु छन् भने महिलाको हकमा भने सानै उमेरमा एकल
मध्यरातमा एक्ली युवती र म
लिफ्टका लागि हात हल्लियो । यति राति मागिएको लिफ्टलाई बेवास्तागर्न मिल्दैन भन्नेलाग्यो । प्रायः अफिसको काम सकेर म रातको १२ बजे घर जान्थेँ । नयाँ बानेश्वरबाट कीर्तिपुरसम्मको यात्र हुन्थ्यो। त्यसदिन पनि म बबरमहल पुगेको थिएँ । जहाँ कुनै युवतीको हात हल्लियो । र, म आफ्नो मोटरसाइकल रोक्न बाध्य भएँ । ‘प्लिज मलाई लिफ्ट दिनु न दाइ, ट्याक्सी नि पाइएन’ मधुर आवाजमा उसले भनी । तर, उसको दाइ
साउन पहिलो साताको एक दिन । झमक्क साँझ पर्न लागेको थियो । न्यूज रुम, प्राइम बुलेटिनको तयारी । निकै हतारमा थिएँ । ६ बजेपछि स्वभाविक रुपमा न्यूज रुमको प्रेसर यसै हुन्छ । त्यही प्रेसरका बीच समाचार कक्षमा छिरेकी थिइन् उनी । शुरुमा ध्यान दिइनँ । अझ भनौ ध्यान दिन जरुरी ठानिनँ । त्यस्तो ध्यान दिनुपर्ने खास केही थिएन, उनमा । समाचार कक्षमा मानिसहरु आउने जाने क्रम चलिरहन्छ । सबैलाई ध्यान
त्रिभुवन बिमानस्थलले मलाई हप्कायो “सर तपाइको घाँटीको खादा फुकाल्नुस”
कुरो लगभग ३ महिना अगाडी म घर बिदामा गएर कर्म भुमी फर्किने दिनको हो । कोठा बाट सबै आफन्तजनहरु लाई बिदाईको हात हल्लाउँदै गला भरी खादा, गह भरी आँसु , मन भरी बिछोडको पीडा, अनि भबिष्यको लागि केही धन कमाउने मीठो सपना बोकेर एयरपोर्ट तर्फ आउदै थिए । जुन समय बेलुकी ९ बजेको थियो । मेरो जेठान साब र दुई भेनाहरु मलाई एयरपोर्ट सम्म पुर्याउन आउनु भएको थियो । त्रिभुवन अन्तरास्ट्रिय बिमानस्थल
पोल्न ल्याएकालाई जसले ब्युताएर पठाए
‘वैद्यराज, म त अन्तिम भएछु है !’ ‘अन्तिम त यो ठाउँ सबैको हो हजुर, यो त पवित्र पशुपति, बागमतीको काख हो ।’ ‘हो, म यही पवित्र ठाउँमा छु है वैद्यराज !’ निधनअघि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र पिता हिरानन्द वैद्यबीचको यो संवाद सुन्दा बालकै थिए सुवर्ण बैद्य । बालसुलभ लयमा खेल्दै बाबुको छेउ पुग्दा सुनेको यस्तो संवादको मूल्यबोध त्यति बेला थिएन उनलाई । जीवन र मृत्युबीचको स्पेसमा अटाउने